Todobaadkii Xoriyadda mise Todobaadkii Tiiraanyada? | KEYDMEDIA ONLINE
Todobaadkii Xoriyadda mise Todobaadkii Tiiraanyada?
Guuxa bulshada ayaa Todobaadkii Tiiraanyada, ku suntay, maalmihii ay Dowladda Fadaraalku ugu yeertay todobaadkii xoriyadda, kadib markii Dowladda Mareykanku caddeysay in Ciidamo Soomaaliyeed lagu arkay waqooyiga Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhamaadkii bishii hore ee Juun iyo billaawgii bishaan Julay, waxaa dalka ka dhacay dabbaaldeygo lagu maamuusayay lixdan iyo kow guuradii ka soo wareegtay markii gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriisku ka guureen Soomaaaliya 1960-kii.
Xaflado waaweyn oo Dowladda Fadaraaka soo abaabushay ayaa la dhigay, bulsho danyar u badan oo degmooyinka looga soo aruuriyay basaska Gobolka Banaadir ayaa laga buuxiyay Tiyaatarka Qaranka si uu Farmaajo ugu jeediyo khudbad aan waaqica lagu jiro la socon.
Hayeeshee, Dabaaldeggaas waxaa barbar socday, illin iyo baroor waalidiin ubadkoodu maqan yahay, oo kuwa wadiniyadda dadka uga sheekeynaya ay ka iibiyeen Itoobiya oo loo aqoonsan yahay cadow ugu weyn ee Soomaaliya leedahay taariikhda.
Isla saacadda uu Farmaajo dadka u badan Malaamileyda laga soo aruuriyay Kaamamka Muqdishu kula daabaal-degayay Tiyaatarka Qaranka, waxaa socday kulan uu koongareeska Mareykanka ku dhageysanayay Robert F. Godec, oo ah ku-xigeenka Xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka, kaas oo Ilhaan Cumar u xaqiijiyay joogitaanka ciidamada Soomaaliya ee Itoobiya.
Marka laga yimaado xaqiiqinta Mareykanka, Warbixin ay hore u soo saareen Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eratariya ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya.
Inkastoo, ku dhawaad Lix bilood ay Kooxda Farmaajo ka aamusan yihiin cabshada waalidiinta ku bannaan-baxayay waddooyinka waaweyn ee Muqdisho, mararka qaarna jirdil, caga-jugeyn iyo digasho la isugu darayay, hadana todobaadkii xoriyadda ee la soo dhaafay waxuu ahaa mid tiiraanaayo hareysay.
Ku dhawaad hal bil ayaa ka soo wareegtay markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed, ilaa hadda ma jiro wax shaqo ah oo guddigu qabtay, isla-markaana uu la wadaagay bulshada.
Keydmedia Online, waxa ay ogaatay xog ku saabsan in Dowladda Fadaraalka ay hor istaagtay isku soo baxyo nabadeed oo ay qabanqaabinayeen Ururro Bulsho, oo lagu soo beegayay Kowda Luuliyo, si garab istaag loogu muujiyo waalidiinta cadaadisna loo saaro Dowladda.
Ilaa hadda qaar ka mid ah dhalinyaro arrinkaas loo xiray 29-kii Juun ayaa xabsiyada Muqdisho ku jira.